GoAnimate na-agbakwunye Enterprise, Whiteboard, na Infographic Video Atụmatụ | Martech Zone
Ndị na-ere ahịa na-achọpụta na vidiyo na-enye ohere maka njikọ mmetụta uche na vidiyo vidiyo na-egosi 30 sekọnd n'okpuru 2 nkeji bụ ụzọ dị egwu nke isi na-elebara anya ma na-emezi mgbanwe ntụgharị. Naanị izu gara aga, onye ọrụ ibe Andrew n'akuku kwụsịrị ụlọ ọrụ anyị ma gwa anyị ụdị ọ heụ ọ na-enwe na ya Goanimate ma ma o nwere ike ije ozi ma ọ bụ na ọ gaghị.
Fewbọchị ole na ole ka e mesịrị, m na-ahụ ngosipụta ndụ (site na COO Gary Lipkowitz) nke ihe ngosi ihe omuma ohuru nke GoAnimate na ihe omuma ihe omimi vidio nke etinyere na ikpo okwu maka imeputa nkọwa vidiyo na ihe omuma ihe omuma.
Ọ bụrụ na ị tinyegoro ihe eji edezi vidiyo ma ọ bụ Flash, njirimara onye ọrụ GoAnimate dịkwa ike, naanị na ọtụtụ puku ndị ọzọ, ihe nkiri, omume na nhọrọ. Kama ide ihe na banyere ya, ka anyị video kọwaa.
GoAnimate Animated Infographic vidiyo
Nke a bụ vidiyo nkeji 2 site na GoAnimate na imepụta vidiyo infographic:
Nke a bụ a Goanimate vidiyo vidiyo ihe kariri nkeji oge nke otu n’ime ndi GoAnimate kere:
GoAnimate Whiteboard Animation na-akọwa vidiyo
Ma lee a Goanimate eserese vidiyo vidiyo Onye ọrụ mepụtara na South African Reserve Bank:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmalite GoanimateM ga-akwado ndị nchịkọta ọrụ, isiokwu na vidiyo na GoAnimate na etolite iji nyere ndị ọrụ aka ị nweta akụkọ ha.
GoAnimate Enterprise, Team and Collaboration Atụmatụ
ugbu a Goanimate ejirila ngwaọrụ gbasaa GoTeam ịnye ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ịkpọ ndị na-emekọ ihe ọnụ na ndị nyocha, kesaa ndetu site na usoro iheomume, wee rụọ ọrụ na vidiyo dị ka otu!
Nke kachasị mma, Goanimate na-aga n'ihu ịgbakwunye ụda animation ọhụrụ na nchịkọta ya maka ndị ọrụ kwa izu ọ bụla. Ha na-egekwa ntị n’arịrịọ ndị obodo ha na-arịọ ha.
Tags: andrew n'akukuvidiyo na-eseanimated video mmekotankọwa vidiyoGary Lipkowitzonye na -elekọta mmadụvidiyo vidiyoinfographic vidiyovidiyo vidiyo
Marketingzụ ahịa Kachasị Mma: Ihe Mere I Ji Kwesịrị Idozi Nkebi Brandgha na Ọrụ & Akụkọ